Manohy ny fitsidihana ireo kaominina iandraiketany ato anatin’ny distrikan’i Manjakandriana hatrany ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL – Sénat de Madagascar
Manohy ny fitsidihana ireo kaominina iandraiketany ato anatin’ny distrikan’i Manjakandriana hatrany ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL
March 7, 2019 Michel Hervey ANDRIANIRINA
Tamin’ity herinandro ity dia miditra amin’ny Kaominina faha 23 (telo ambi-roapolo) amin’ny Kaominina 25 ato anatin’ny Distrika ny Manjakandrina ny Loholona mpiahahy. Sambany teo amin’ny izany Kaominina MERIKANJAKA izany tokoa no nisy Manam-pahefana nitsidika izany toerana izany; hany ka teo no nanehoan’ny andaniny sy ny ankilany, izany hoe ny Loholona Mourad ABDIRASSOUL sy ireo Tompon’andraikitra isa-tsokajiny tany an-toerana ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny mety hisian’ny fiaraha-miasa izay miankina indrindra amin’ny fisian’ ny fomba fiasa mangarahara , ny fitondrana tsara tantana, ny ady amin’ny kolikoly eo amin’ny Kaominina izay antoky ny fanohanana ny fikarohana ny fomba ametrahana ny soritr’asa izay ilain’ny mponina .
Saro-dàlana tokoa vao mahazo an’izany Kaominina Merikanjaka izany koa tsy misy Tompon’andraikitra afaka hitsidika izany. Ny Loholon’ny Madagasikara Mourad ABDIRASSOUL anefa dia tsy nitarain-tana-miepaka ary tonga nanoro hevitra ireo Tompon’andraikitra isa-tsokajiny ao amin’izany Kaominina izany ny tokony ho fomba fiasa ho amin’ny fampandrosoana fa tsy hihanona fotsiny amin’ny fangatahana lava reny.
Tapaka ary fa hiditra bebe kokoa, rehefa ho tontonsaina ny fiofanana sy fanamafisana ny hai-raha (renforcement de capacité) mikasika ny fitondrana tsara tantana sy ny ady amin’ny kolikoly ary indrindra ny fametrahana ny fomba fiasa manara-penitra (standard de service) hisian’ny mangarahara tanteraka eo amin’izany Kaominina izany. Aorian’izay vao miditra tanteraka amin’ny soritr’asa isan-karazany.